လိပ်ပြာသန့်စွာ အရက်ရှစ်မျက်နှာကို ကြည့်နိုင်ပါစေ (ညီမလေးဖတိဖို့) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Tank » လိပ်ပြာသန့်စွာ အရက်ရှစ်မျက်နှာကို ကြည့်နိုင်ပါစေ (ညီမလေးဖတိဖို့)
လိပ်ပြာသန့်စွာ အရက်ရှစ်မျက်နှာကို ကြည့်နိုင်ပါစေ (ညီမလေးဖတိဖို့)
Posted by htet way on May 5, 2012 in Think Tank | 24 comments
ညီမလေးရေ မှုခင်းတွေ ကို အကို ကတော့ သတိထားဖတ်မှတ်ရတာ ၀ါသနာကြီးပါတယ်ကွယ်။ တရားဥပဒေနဲ့ အရေးယူလို့ မရတဲ့ အမှုတွေကို ညီမလေး သတိထားမိရဲ့လား။ အကို မနက်က လက်ဖက်ရည် ဆိုင် ထွက်တော့ လမ်းဘေး လက်ဖက်ရည် ရောင်းတဲ့ လင်မယားက အတင်းထွက်ပြီး ဆရာရယ် မနေ့ညနေက ဒီဆိုင်ရှေ့မှာ ကြွေးလာတောင်းပြီး ဆဲလိုက်တာ ဆရာရယ် ။ ကျွန်မတတို့မှာ ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဘူး
ဒီလို ဆရာရေ့ ဆ်ိုပြီးပြောပြပါလေရော ညီမလေးရယ်။
ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်က မပြေလည်လို့ ကြွေး ယူထားတယ် တစ်ရာကို ၂၀တိုးနဲ့ ။လကုန်ပြန် ဆပ်ရမယ် ဆိုတော့ မပေးနိုင်ခဲ့ဘူး ။ဒီမှာတင်ပဲ ယောက်ကျားလုပ်သူ ကြွေးရှင်က ဆဲတော့ တာပဲ ။ မရိုသေစကားကွာ
မင်းမိန်းမကို ငါနဲ့ လာအိပ်ခိုင်းပါလားဆိုတာပါတယ်။နောက် သူ့မိန်းမကို ခေါ်လာပြီး ပိုက်ဆံနဲ့ တန်အောင် ဆဲကွာဆိုပြီး ဆဲခိုင်းတယ်။ ညီမလေးရေ မျက်စိထဲပုံဖေါ်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ။ ဘယ်လောက် ဆိုးဝါးတဲ့ ပုံတွေဖြစ်နေမလဲ
နောက် ကြွေးပေးရမယ့် လင်မယား မှာ သမီးလေးရှိတယ်။ ထိုင်နေတဲ့ သမီးလေးကို ငါ့ပိုက်ဆံ မပေးနိုင်ရင် နင့် သမီး ငါ့ယောက်ကျားနဲ့ အိပ်ခိုင်းပါလားဆို တာကိုပြောတော့ အသက် ၁၂နှစ်လောက် ရှိတဲ့ ကလေးမလေးက ငိုလိုက်တာလေ။ ဘယ်သူတားတားမရလောက်အောင် ဆဲသံ ညံခဲ့တယ်လို့ သိရတယ် ညီမလေး။ လမ်းမပေါ်မှာ ရိုင်းလိုက်တဲ့ အဖြစ်။
နောက် ကျောင်းဆရာအငြိမ်းစားတစ်ယောက်ကလည်း အတိုးပုံမှန်ပေးနေလျှက် အတင်းအကြပ် အရင်းပြန်တောင်း တရားစွဲနဲ့ အကိုတော့ ငွေတိုးပေးစားတဲ့ လူတစ်ချို့ကို ရွံ့မိပါတယ်ကွယ် လိုင်စင်မရှိရင် အရေးယူလို့ ရတယ်ဆိုပေမယ့် အပေါင်ခံ အတိုးပေး လိုင်စင်ရှိသူက တရားလို လုပ်မှ စွဲလို့ ရတာပါကွယ်။
ညီမလေးရေ တရားရုံး မှာ ဆို ကြွေးမပေးနိုင်တဲ့ လူတွေကို စွဲထားတဲ့ အမှုတွေက များနေပါတယ်။ အကိုတို့ တိုင်းပြည်ကြီးမှာအင်မတန်ကြပ်တည်ူးနေတာ ကို ဒီမှာ မြင်နိုင်ပါတယ်။စပါးပေးတွေ ပဲပေးတွေ ပေးတယ်။
မရတော့ေ၇ှ့နေငှား တရားစွဲ။ညီမလေးရေ တောင်းသူလယ်သမားတွေရဲ့ ဘ၀ပေါ့ ။လယ်စိုက် ခါနီး ငွေမရှိတော့ ငွေတိုးယူ နွံ့နစ် တခါ စပါးကြိုရောင်း စနစ် စပါးပေးမှာ တစ်ဝက်ဈေးနဲ့ …ကွယ် ဆိုးလှတဲ့ ဘ၀ပါ။
ညီမလေးရေ ကလေး ကမိဘတွေ ကြွေးမပေးနိုင်တော့ ကလေးမလေးရဲ့ နုငယ်တဲ့ နှလုံးသားလေးမှာ ဘယ်လောက် ထိခိုက်သွားလေမလဲနော်။ သူ့ ခမျာ စိတ်ထိခိုက်ကြေကွဲလို့ လူ့ ဘ၀ကြီးကို ဘယ်လို မြင်တွေး
ခံစားလေမလဲ။အကို ကတော့ ကြားရရုံနဲ့ တင် ကြေကွဲမိပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လင်ဆိုးမယးတဖားဖားဆိုသလို အရက် သမား မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်ပါကွယ်။ အရက်မူးရင် ခေါင်းကြောင်သွားတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်က သူတစ်ပါးအိမ်ရှေ့မှာ သွားထိုင်နေတယ်တဲ့ ။ တိုတိုပြောရရင်
ရဲက ဖမ်း အမှုဖြစ်တာပေါ့ ။ တဖက်က ကြေအေးလွှာ ထိုးပေးပေမယ့် ကြေအေးခွင့်ရအောင် ငွေ ရှာရတော့ ဆံပင် ဖြတ်ရောင်း ရောင်းလို့ရတာရောင်းရင်း ရှိတာတွေကုန်ခဲ့တယ်ကွယ်။
ညီမလေးရေ လူ့ ဘ၀မှာ အသက်တစ်ရာ မနေရပေမယ့် အမှုတစ်ရာကြုံ ရတယ် ဆိုသလို အမှုတွေ မပွေအောင် သတိထားပါ ကွယ်။ သို့သော် ကြုံ ပြီ ဆိုလည်း အရဲရင့်ဆုံးသာ ခုခံပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်။
စာရေးတဲ့ စာရေး ဆရာကြီးးတွေတောင် အမှုကြုံရတဲ့ သာဓက တွေ ညီမလေး သိမြင်ခဲ့ မှာပါ။
အကို ကတော့ လူကို လောင်ကျွမ်းတတ်တဲ့ ဒေါသကို အတတ်နိုင်ဆုံး ထိန်းကွပ်ခဲ့ ပါတယ်။ ဒေါသကြောင့် အမှုတွေ ဖြစ်ရတယ် မသိမှုကြောင့် အမှုတွေ ဖြစ်ရတယ်။ လေဘကြောင့် အမှုတွေ ဖြစ်ရတယ် မဟုတ်လား လောဘဒေါသ ဆိုတဲ့ အမှောင်ကို သတိကပ်ပြီး ညီမလေးဖြိုခွင်းပါနော်။
ညီမလေးရေ ဂေဇက်ရွာ အလှူ ပွဲကို ညီမလေး လိုက်စေချင်တယ်။ တကယ်ကိုပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ အကို ကအစုကြီးက ရွာသူရွာသားတွေကို မြင်တော့ သူတို့ ရဲ့ ဖြူစင်စိတ်ကို သဘောကျမိတယ်။
သူတို့ ကမြို့က စာရေးဆရာကြီးတွေ ဆိုပြီး လေးစားကြတယ် သူတို့ ရွာကို စေတနာထားတဲ့ စေတနာရှင်တွေဆိုပြီး ကြည်ညိုကြတယ် ကွယ်။တကယ်တော့ နိမ့်ရာကို ဖို့ပေးတာ မင်္ဂလာပဲလေ။ အားနည်တာကို ၀ိုင်းကူတာ
အလှတရားပဲလေ။ ဒီလို အလှူမျိုး ဂေဇက် ရွာ သူရွာသားတွေ မှ မဟုတ်ဘူးတခြား အဖွဲ့ အစည်းတွေ လည်း လုပ်သင့် လှူသင့်တာပေါ့။ အများအကျိုး ထမ်းရွက် ချင်တဲ့စိတ်လောက် မွန်မြတ်တာ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။
နောက်ဆုံး လမ်းပေါ်က ကျနေတဲ့ အမှုက်တစ်စ ဖယ်ရှားပေးတာကစလို့ လူ့ အဖွဲ့ အစည်းကို ထိခိုက်နစ်နာစေမယ့် အရာမျိုးတွေကို စွမ်းစွမ်း တမံ ဖယ်ရှားလုပ်ဆောင် ဖို့ လို အပ်ပါတယ်။မတရားမှုကို တွန်းလှန်ရဲတာ
အမှန်တရားကိုဖေါ်ဆောင် တာ သူရဲကောင်း အလုပ်ပါပဲ။
ညီမလေးရေ စာပေ ရေးသားနေတာ ဟာလည်း အလင်းရောင်ပေးတာပါပဲ။ အပျော်တမ်းဆိုတာထက် လူသားတွေကို အလင်းဖေါ်ဆောင်နေတာပါ။ စိတ်တွေကို ပြုပြင်ဖို့ ဦးနှောက်ကို အဟာရ ဖြစ်ဖို့ သုတစာပေ
နှလုံးသားကို အဟာရဖြစ်ဖို့ ရသ စာပေ တွေ ရေးသားဖို့ ဖတ်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။မှုခင်းဂျာနယ်တွေမှာ တခါက အကို သတင်းတွေ ရေးခဲ့ပါတယ်။ မှုခင်း သတင်းထောက်ပေါ့။ အဲ့ ဒီ အချိန်က အကို က ဆေးလည်း ကု ကျူရှင်လည်း သင်တယ်။မှုခင်းရေးတာက ပြည်သူတွေ ဥပဒေကို နားလည်စေချင်လို့ပါ။ သို့သော် ညီမလေးရေ လူတွေက အကို ကို ရဲလို ဆက်ဆံလာတယ် ဒါကြောင့် အကို ဟာ မှုခင်း သတင်းရေးတာကို ရင်နာစွာပဲ စွန့်လွှတ် ခဲ့ပါတယ်ကွယ်။
၀ါသနာကြီးလွန်းလို့ သာ ကဗျာတွေ စာတွေ ဆက်ရေးနေတာပေါ့။ စာပေ သမားတွေရဲ့ စိတ်ဟာ လှပါတယ် ညီမလေး။ သူတို့ ဟာ စိတ်ခံစားမှုကို အခြေတည်တယ်ဆိုပေမယ့် အီမိုရှင်း သက်သက် တော့ မဟုတ်ဘူး
သရုပ်မှန် ကို လေးစားတဲ့ ပြည်သူတွေကို လေးစားတဲ့ ပြ ည်သူ့ အကျိုး ပြု တွေပါကွယ်။တခါက စာရေးဆရာတစ်ယောက် အိမ်ကို အလည်သွားတော့ ရှိတဲ့ အလုပ်ကလေးရပ်ပြီး လေးလေးစားစား လက်ခံစကားပြောတယ်
သူကလည်းပြောတာ အကိုမှတ်သားမိပါတယ် အသွေး အရောင်တူငှက်တွေ ဟာ စည်းလုံးရမယ် ညီညွတ်ရမယ်တဲ့။ ဘယ်လောက် လှတဲ့ မှတ်သားစရာစကားလည်း ညီမလေးရယ်။
ညီမလေးရေ မတရားတဲ့ စိတ်ဟာ တချိန်မှာ ကိုယ့် စိတ်က ကိုယ့်ကို ပြန်ခြောက်တာပါပဲ။ အတုံ အလှဲ့ ဆိုတာ ရှိစမြဲပဲ ညီမလေး။ အကို အိမ်မဲမြို့ရဲ့ သရက် ကုန်း တဖက်ကမ်း သီကွင်းကျေးရွာကို ဆေးကုသွားတော့ လူတစ်ယောက်ကို အများက ၀ိုင်းရိုက် လိုက်တာသေသွားတယ် သူအမည်ကို အကို ခုထိ မှတ်သားထားတယ်။လှဝင်းစိန်တဲ့ ။ ထောင်ပြေးတစ်ယောက်ပါ။ လူ၃ယောက်က ပေါက်တူးရိုးတွေနဲ့ ၀ိုင်းရိုက်ကြတာလေသွားတွေ
အကုန် ကျွတ်ကုန်တယ်။ နဂိုက လှဝင်းစိန်ဟာ နွားရောင်းလို့ သူ့အမေက ဆူတာနဲ့ အမေကို လက်သီးနဲ့ ထိုးတာ သူ့အမေ ကြီးက သွားနှစ်ချောင်း ကျွတ်သွား တယ်။နောက်ဆုံးတော့ သူလည်း သွား၃၂ချောင်းကျွတ်ပြီး အသေဆိုးနဲ့ သေခဲရတယ်။
အကိုပြောချင်တာက မကောင်းးတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ်မယ် လို့ ဘာသာတိုင်းက ပြသပေမယ့် လူအတော်များများက သတိမ၀င်ကြပါဘူး။ လှဝင်းစိန်လို ထပ်တူ ပြန်ခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ၊အမြောက် အများရှိပါတယ်။
ညီမလေးရေ မတရား မှု ကို ပြုသူဟာ မတရား မှုရဲ့ ဒါဏ်ကို ပြန်ခံ ရတာပဲ။ နိုင်လို့ အနိုင်ကျင့် ခဲ့ ရင်လည်း တချိန်မှာ ပြန်ပြီး အလှည့်ရောက်တတ်ပါတယ်။ညီမလေး လည်း ညှာတာမှုနဲ့ တရားနဲ့ နေတတ်ပါစေကွယ်။
ခုလည်း ရစရာရှိတဲ့ ငွေလေးနှစ်သောင်းကျော်ကို ဒီလို ပိုးစိုးပက်စက် ပြောတာဟာ လွန်လွန်း သလို အတုံ့အလှည့် ဆိုတာရှိတယ် ဆိုတာ သူတို့ သတိမူမိခဲ့ကြဘူး။ကိုယ်အတွက်ရရင် ပြီးရောဆိုပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်တစ်ခုပေါ်မှာ
အတင်း အကြပ်တောင်းတာလည်း အလှည့်ဆိုတာရှိပါသေးတယ်လို့ အကို ကဆိုချင်ပါတယ်။
လူဘ၀ဟာတိုတောင်းပါတယ် ညီမလေး အလင်းအမှောင် အဖြူအမည်း ဒွန်တွဲနေတတ်ကြတဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ လေကကြီးထဲမှာ ညီမလေးဖြတ်သန်းမှုဟာ လိပ်ပြာသန့်ပါစေကွယ်။ကိုယ်ချင်းစာသော
နုတ်ခမ်းများနဲ့ စကားပြောတတ်သူ၊နှလုံးသားမှာ ချစ်မေတ္တာနဲ့ အတိပြီးတဲ့ စာနာမူမျက်ဝန်းပိုင်ရှင် ဖြစ်ပါစေကွယ်။ညီမလေးရဲ့ သက်မွေး ၀မ်းကြောင်း လုပ်ငန်းဟာ သူတပါးမျက်ရည်စက်တွေ သောကတွေ ကင်းပါစေလို့ အကိုပြောချင်ပါတယ်။
ညီမလေး ရေ ဘ၀ပြူတင်း ဟင်းလင်းပွင့် လို့ ၀မ်းစာရှာဖွေ စားသောက်ရတဲ့ အခါ သမ္မာအာဇီဝဖြစ်အောင် ကြိုးစားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ကိုယ့် ၀မ်း ကိုယ်ကျောင်းရင်း လောက လူ့ရွာက လူသားတွေ အကျိုးကိုလည်း ဆောင်ရွက် နိုင်ပါစေလို့ အကို တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်ကွယ်။
ရွာကို ပြန်ရောက်တိုင်း စိတ်မကောင်းစွာ ကြားသိနေရမြဲပါ ..
တောင်သူတွေမှာ သီးနှံ မရခင် အကြွေးယူစားလိုက်၊
သီးနှံလေး ပေါ်လာတော့ ပြန်ဆပ်လိုက်နဲ့ ..
တစ်နှစ်အတွင်း ကိုယ့်အတွက် အဖက်တင်တယ်ဆိုတာ မရှိ
အကြွေး သံသရာထဲမှာပဲ တဝဲဝဲ လည်နေရတဲ့ အဖြစ်ပါ …..
အကြွေးယူထားတဲ့လူက ကြွေးရှင်ကို အောက်ကျို့ရမြဲပါပဲ …
သီးနှံ မရလို့ အကြွေးကို အနည်းအကျဉ်းသာ ပြန်ဆပ်နိုင်တဲ့ အခါမျိုးမှာလည်း ကြွေးရှင်ရဲ့ အပြောအဆို တွေကို ခံရပါသေးတယ် ….
ငွေတိုး ချေးစားသူတွေ မရှိလောက်အောင် မြန်မာပြည်ကြီး ချမ်းသာပါစေလို့ပဲ ကျနော်ကတော့ တိတ်တခိုး ဆုတောင်းမိပါတယ် ခင်ဗျာ …
သူတစ်ပါးကို မညှာမတာ ပြောဖို့ဆိုတာ လွယ်ပါတယ် ..
အဲလို ပြောတဲ့အခါမှာလည်း ပြောသူက လွယ်လင့်တကူ မေ့တတ်ပေမယ့်လို့ ..
အပြောခံရသူကတော့ စိတ်ထားမှာ သေတဲ့ထိအောင် မပျောက်ဘူး ဆိုတာမျိုးတွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ် ..
ဆရာ ပြောသလို အတုံ့အလှည့်ဆိုတာ ရှိတဲ့ ဒီလောက်ကကြီးထဲမှာ …
အပြောခံရသူနဲ့ ပြောသူဟာ နောင်တစ်ချိန်မှာ ဘယ်လို အနေအထား မျိုးနဲ့ ဆုံတွေ့လာဦးမယ် ဆိုတာ အတပ် ပြောလို့ မရနိုင်ပါဘူး …
အကယ်၍များ အပြောခံရသူကို ပြောသူက ပြန်လည် အောက်ကျို့ ရတဲ့ အခြေအနေမျိုးများ ဖြစ်လာခဲ့ရင် …
ဆရာ ပြောသလိုပဲ ဆန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လောကထဲမှာ ကိုယ့်ဘဝကို ဖြတ်သန်းတဲ့အခါ ကျနော်ကတော့ လိပ်ပြာသန့်သန့် နဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းသွားချင် ပါတယ်ဗျာ …
အသက်တစ်ရာမနေရ အမှုတစ်ရာပွေရ ဆိုသကဲ့သို့ ပဲ ဘ၀က ပွေလီရှုပ်ထွေးလှတယ်ဗျား..
အဲဒီအချိန် ဆရာထက်စာလေးဖတ်ပြီး ဆင်ခြင်သတိထားလို့အတုံ့ အလှည့်ရှိတဲ့ဘ၀ကြီးကို သတိမူနိုင်ပါစေဗျို့ ..
လိပ်ပြာ သန့် နိုင်ကြပါစေဗျား..
ငွေရှင်က သူ့အကြွေးမပေးလို့ဆိုပြီး နိုင့်ထက်စီးနင်းလုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။
အဲဒါတွေလုပ်လို့ရနေတာ မြင်တွေ့နေရတာတွေက ဘာကိုသက်သေပြသလဲဆိုတော့
တရားဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဘို့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေ တာဝန်မကျေကြောင်း သက်သေပြနေတာပါပဲ။
ငွေလိုတဲ့ ဆင်းရဲသာတွေ တစ်ရာကို တစ်လ နှစ်ဆယ်တိုးနဲ့ချေးရတယ်ဆိုတာ-
ငွေချေးမယ့်သူ မရှိလို့ နည်းလို့ ဖြစ်ရတာဖြစ်တယ်။
ငွေချေးပေးမယ့်သူတွေ အပြိုင်အဆိုင် ၀ိုင်းဝိုင်းလည်နေရင် အလွန်ဆုံးယူလို့ရရင် တစ်ရာကို တကျပ်တိုးပေါ့…။
ထားပါ… တစ်ရာကို နှစ်ကျပ်တိုးလောက်ဆိုလဲ သိပ်မဆိုးလှပါဘူး…။
တောင်သူလယ်သမားတွေပေးရတဲ့ အောက်ခြေပြည်သူတွေပေးရတဲ့ အတိုးနှုံးကိုကျစေချင်ရင်
ငွေချေးပေးချင်တဲ့ ငွေရှင်တွေ အပြိုင်အဆိုင်ဝိုင်းဝိုင်းလည်နေအောင် လုပ်ရမယ်။
ငွေချေးပေးချင်တဲ့ ငွေရှင်တွေ ဘယ်လိုအခြေအနေမှာ ၀ိုင်းဝိုင်းလည်မလဲဆိုတော့-
သူတို့ချေးပေးတဲ့ပိုက်ဆံ အတိုးရောအရင်းရော လုံးဝမဆုံး+အချိန်မှန်ပြန်ရမယ်
အဲဒါကိုပြန်ချုပ်လိုက်ရင် ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေ အတိုးနှုံးသက်သာစေချင်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာ ပေါ်လာပါမယ်။
အဲဒါမှအပ အခြား လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်း မရှိပါဘူး…..။
ဆရာထက်ရဲ့့့ စာကိုဖတ်ရပြီးတော့ မဲမှောင်သိပ်တည်းပြီး မတူညီကွဲပြားခြားနားတဲ့ဆန့်ကျင်ဘတ်တွေနဲ့မတည်မြဲတဲ့ အနာဂတ် ဆီသို့ရှောက်လျှမ်းဖို့ ဖရောင်းတိုင်တတောင့်ရပြီမို့ အရပ်ရှစ်မျက်နာကို လိပ်ပြာ သန့်သန့်လေးနဲ့ ချီတက်ပါတော့မည်။ လေးစားစွာဖြင့် ညလေး
မဟာရာဇာ အံစာတုံး ဆရာခင်ဗျား
စပါးပေးမပေးနိုင်ရင် ထပ်တိုးဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ် ဥပမာ ခင်ဗျားက စပါး
တင်း ၁၀၀ယူလို့ မပေးနိုင်ရင် နောက်နှစ် ၂၀၀ပဲ
လယ်သမားမွဲပြီး စပါးပေးသမား ကြီးပွား လူတွေကို အနိုင်ကျင့်တော့တာပဲ
မပေးဘူးလား တရားမမှု ..တရားသူကြီးနဲ့ နှစ်ပါးသွားပေရော့
ကံဆိုးရင် ရာဇ၀တ်မှုပဲ။ကျုပ်တို့ မြို့မှာ ဒီနည်းနဲ့ ချမ်းသာသူတွေ များလို့
ဆရာလေးခင်ဗျား လိပ်ပြာသန့်စွာ အရပ်ရှစ်မျက်နှာကို ကြည့်နိုင်ဖို့
ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုတွေမှာ တရားနဲ့ ညီနေရင် လှပနေမှာပါ။
နောက် တိတိကျကျ ပြန်ဆပ်တဲ့ လူလည်း လိုအပ်နေပါတယ်။
တကယ်တော့ မှန်ကန်မှုရှိနေရင် အဆင်ပြေနေမှာပါ။
အတိုးနုန်း သက်သာပြီးချေးတာဟာ လူတွေကို ကူညီနေတာပါပဲ။
ဒီလိုလူမျိုး အများကြီး လိုအပ်ပါတယ် လို့ လေးစားစွာ ပြန်ကြားလိုက်ပါတယ်။
လောက ကို လိပ်ပြာသန့်စွာ ချီတက်မယ်ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်
Etone နဲ့ ညလေး အိတုံနဲ့ တူတူပဲလားတစ်ယောက်ဆီလား သိပါရစေ။
လိပ်ပြာသန့်စွာလောကကြီးမှာနေထိုင်ဖို့ ယခုထက်မကကြိုးစားပါဦးမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်ဗျာ…
ကတိစကားကြားရတာ မင်္ဂလာရှိလိုက်တာ ဆရာရေ့
ကျွန်တော်လည်း ထို့ အတူပါပဲလို့
ခုလို မအားတဲ့ ကြားထဲက ရွာ ကို ခင်မင်စွာ ၀င်နိုင်တဲ့
ခင်ဗျားရဲ့ စိတ်စေတနာကို လေးစားပါတယ်
ဒီဘေးက ကင်းအောင် နေနိုင်အောင် ကြိုးစားကြပါစို့ လို့…….
ငွေတိုးပေးစားရင် အရေးယူလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ ဥပဒေ
ဒီလူတွေ ခံနေသလား ။အနားက လူတွေက မကူညီကြဘူးလား
နောက် ..အာဏာပိုင်ကကော ဘာမှ မလုပ်ဘူးလား
ဒိကောင်တွေ တိုင်လည်း ပိုက်ဆံဘက်ပဲပါမှာပါ။
Dr. ဖိုးပြုံးချို says:
ဆရာထက်ရေ လေးလေးစားစား ဖတ်ပြီး သုံးသပ်မိပါတယ်…ရွာသားများပြောတဲ့ အတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်၊ ညီမလေးဖတ်ဖို. ဆိုပေမဲ့ ကျွန်တော်လည်း လိပ်ပြာသန့်စွာ အရက်ရှစ်မျက်နှာကို ကြည့်နိုင်အောင် ကြိုးစားသွားမှာပါ…ဒါထက် နောက် gazette က အလှုလုပ်ရင် Post လေးတင်ပေးကြပါဗျာ..
ဆရာထက်ရေ ဖတ်ရှု ဆင်ခြင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာ..
အသိမို့ ကူညီပီး ချေးငှားမိရာက ငွေပြန်မဆပ်ဘဲ ရှောင်ခံရတဲ့ ကျနော့် ကိုယ်တွေ့လေးလည်း ရေးအုံးမယ်ဗျာ
အရပ်ရှစ်မျက်နှာဆိုဒေါ့ မိုးနတ်မင်းနဲ့ ငရဲမင်း ဒို့ဂို မထီမဲ့မြင်လုပ်တဲ့ သဘောလား…။
အဲ့ဒီနေ့က လူတွေ တော်တော်များများက ၀ိုင်းကြည့်နေကြတယ်လို့ ပြောပါတယ်
အာဏာပိုင်ဆိုတာလည်း တိုင်မှ အရေးယူတာမလား…..
ရွာအလှူတွေရှိရင် ကိုယ်တိုင် လိုက်ပါနိုင်ရင် ရေးမှာပါ
ညီမလေးဖတ်ဖို့ ဆိုတာက အာလုပ်စကားပါ အားလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ ဆရာ
ညီလေးရော ညီမလေးရော အကို ရော အမရောပါ။
ဆရာမောင်သာချိုရေးတဲ့ သမီးဖတ်ဖို့ ဆောင်းပါးတွေလို ပါခင်ဗျား။
ကျွန်တော်က မမှီ မကမ်း လိုက်တုထားတာပါ
ရွာစားကျော်လည်းရေးပါ ။ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ အတွက် ကိုကြောင်ကြီးနဲ့
ဒါက ရိုင်းရိုင်း ပြောပြီး အကြွေးပြန်တောင်းတာ
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မတိုင်မီက အတိုးမဲ့ ချေးငွေတွေ ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့ အဖြေထွက်တော့ အရင်းတွေကို ချက်ခြင်း ပြန်သွင်းခိုင်းတဲ့ အဖွဲ့အကြောင်းရော ?????
ဒီဘက်မှာလည်းချေးငွေ တွေ ဆင်းရဲသားလျှော့ပါးရေးတွေကိစ္စ ပြဿနာကြားနေရပါတယ်။